စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဘဝတစ်နှေးကွေးအရှိန်အဟုန်င် အကယ်. သင်ရှာနေ, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရုပ်ပုံ; လာဗင်ဒါ၏လယ်ကွက်, နေရောင်, နှင့်သံလွင်ပင်များ။ ရွာရင်ပြင်ရှိလေယာဉ်ပင်များ၏အရိပ်အောက်တွင်တနင်္ဂနွေနေ့လည်စာ, အပြန်အလှန်လမ်းဘေးကဖေးမှာကဖေး creme…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သင်၏နောက်အားလပ်ရက်တွင်ထူးကဲကောင်းမွန်သောဗိသုကာလက်ရာအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေနေသည်? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်တို့အဘို့ဥရောပထက်မပိုကောင်းသောအရပ်ဌာနလည်းမရှိ. သငျသညျဂန္ထဝင်ဗိသုကာစတိုင်များကိုစိတ်ဝင်စားနေဒါမှမဟုတ်တချို့ပြောင်-လူသိများရတနာကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိမရှိ, သငျသညျဥရောပမြို့ကြီးများဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြ. Let’s…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သငျသညျအကြီးအအပြင်မှာတစ်ဦးကိုနှစ်သက် Are? ကျနော်တို့သစ်တောတွေပြောနေတာဖွင့်, ရေကန်များ, သစ်ပင်ပန်းမန်, နှင့်သတ္တဝါများ. တောင်တက်, စက်ဘီး, အထွေထွေလေကောင်းလေသန့်. ထိုအခါဥရောပ၌အလှဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့. လူအစုအဝေးကိုမေ့လျော့, ယင်းကမ်းခြေကိုမေ့လျော့, forget cities…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အဘယ်ကြောင့်လူတွေခရီးသွားတူအကြောင်းပြချက်များများရှိပါတယ်. သငျသညျအမြားဆုံးကိုမကြာခဏစကားကိုနားထောငျနိုငျသူမြားကိုတစျခုမှာအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံများရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်. အဘယျသို့ခရီးသွားလာနိုင်အောင်လှပသောစေသည်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်. Adrenaline junkies…